အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: မျှော်လင့်ချက် မီးအိမ်
33 Responses to “မျှော်လင့်ချက် မီးအိမ်”
ko kyi thar said...
ကျွန်တော်အတွက်တော့ အားဆေးတစ်ခွက်ပါပဲ . . . .
“မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး။ ဘယ်တော့မှ လွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးမပေးနဲ့။ အလျှော့မပေးနဲ့”
အဲဒီ စကားလုံးလေးက ကျွန်တော် ရင်ဘတ်ထဲ နေ့စဉ်ရိုက်ထည့်နေရတဲ့ စကားလုံးပါပဲ . . .
နောက်လည်း ဆက်ပြီး ရိုက်ထည့်နေမယ် ဒီစကားလုံးအတွက်နဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ် ကျွန်တော်တောင် မညှာတတ်တော့ဘူး စိတ်ဓာတ်ကိုလဲ အမြင့်ဆုံးရောက်အောင် ဆွဲတင်နိင်နေခဲ့တယ် ကျေးဇူးပါ မချော ဒီပို့စ်အတွက်
ဘ၀မှာ သာယာလှပတဲ့ ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုရင် ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ကျော်ဖြတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို ကျွန်တော် ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်.
အဲဒိစကားလေးတွေ အရမ်းကြိုက်တယ် .. ဒီပိုစ့်အတွက် ကျေးဇူးပါ မချော..
nang mya sein said...
so good ...thankalot ma ma ...
ဒီစာလေး ဖတ်ပြီး မျက်ရည်တောင် ဝဲလာအောင် ကြည်နူးမိပါတယ်..
ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ကိုယ်တို့လည်း ယုံယုံကြည်ကြည် ကျင့်သုံးသင့်တယ်နော်.
စာကျက်ဖို့ အားတွေ ထည့်ပေးတဲ့အတွက်
သိပ်ကောင်းတယ် ချောရေ ...
အပေါ်မှာ မေပယ်လ်ပြောသလိုပဲ စာကျက်ဖို့အားတွေ ထည့်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။
စာရေးသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးအတိုင်း စိတ်ခွန်အားတွေရယူသွားပါတယ်း)
အင်း.. ဘ၀မှာ အားမလျှော့ပဲ ကြိုးစားလို့အောင်မြင်မှုတွေရသွားတဲ့ သာဓကထဲက တစ်ခုပေါ့ဗျာ...
ဆေးလာသောက် ချောရေ ၊ အားလုံးကောင်းပါသည် ခင်များးးးးးးးးးးးး။
ဆေးလာသောက်ပါတယ် ချောရေ ၊ အပေါ်က ကွန်မန့်မှာ ပါတယ် ကျန်နေခဲ့လို့ အထင်လွဲမှာဆိုးလို့ ပြန်မန့်တာပါ ၊ အားလုံးကောင်းပါသည် ခင်များ ..။
ဘဝမှ စိတ်ထားတတ်ရင် သေနိုင်ပါရိုးလား..လေပါတီရယ်
လောလောဆည် အရှုံးမပေးချင်ဆုံးက ဒီတိုင်းပြည်က ကွန်နက်ရှင်..။
ငါကွ.. အရှုံးမပေးဘူး ။ :)
အမရေ သိပ်ကောင်းတဲ့ပို့စ်ပါ တကယ်ကောင်းတယ် ..ခွန်အားတွေပိုတက်သွားပြီကျေးဇူးပဲ အမ
“တစ်မိုင်ပြီးတစ်မိုင်သွားဖို့ဆို ခြေကုန်လက်ပန်း ကျနိုင်တယ်…. တစ်ပေပြီးတစ်ပေ ခရီးသွားရင်လည်း မောပန်း ခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့ ထင်ရတယ်…. တစ်လက်မပြီး တစ်လက်မ ဖြေးဖြေးချင်းသာ လျှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရည်မှန်းတဲ့ခရီးပန်းတိုင်ကို သေချာပေါက် မရောက်စရာ မရှိပါဘူး”
အဲဒီစာသားလေးသိမ်းသွားတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ဓါတ်တွေ အောက်ပြုတ်ကျတဲ့အခါ ကောက်တင်ဖို့လေ .. :) အရေးအသားလေးကလည်းဆိုဖွယ်မရှိကောင်းနေတာပါပဲ၊ ခွန်အားပေးတဲ့ ပိုစ့်လေး
မချော ရေ.. ကျွန်တော် စိတ်ရှုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အခုလို ပို့စ်လေး ဖတ်လိုက်ရလို့ စိတ်အားတွေ အရမ်းတက်စေပါတယ်ဗျာ။ အထူးသဖြင့် ဒီစာကြောင်းလေးက ပိုပြီး အားဆေး ဖြစ်စေပါတယ်.. `` ဘ၀မှာ သာယာလှပတဲ့ ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုရင် ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ကျော်ဖြတ်ရလိမ့်မယ်``
အစ်မချော..... ကျနော်အတွက်တကယ် ခွန်အားတွေရစေတဲ့ စာစုလေးတစ်ခုပါပဲဗျာ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
အင်း....မျှော်လင့်ချက် .. မျှော်လင့်ချက်...
ဒါပေမဲ့လည်း တခါတခါကျ မောတယ် ... ။
September 10, 2010 at 3:06 AM
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ဒီလိုတွေးမိတယ်။
အဲဒီဘွဲ့လက်မှတ်ထက် ဘေးက ဆိုးတူကောင်းဖက် နေပေးခဲ့တဲ့ ဘဝအဖော်ကို ရတာ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံး လက်ဆောင် ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဒီ့ထက် ပိုကောင်းတဲ့ မျှော်လင့်နိင်ဖွယ် ရှိနိင်ပါအုံးမလား။ ကာယကံရှင်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားသာ မကောင်းခဲ့ရင် ဒီလိုသာယာတဲ့ ဘဝမရနိင်ဘူး။
ဟုတ်တယ်...ဘယ်တော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်မလျော့နဲ့ အရှုံးမပေးနဲ့။
ချောရေ.. ကောင်းမွန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းနဲ့ ချောမွေ့တဲ့ ဘာသာပြန်မှုကြောင့် ဖတ်နေတုန်း ဇာတ်လမ်းထဲ ကိုယ် ၀င်သွားခဲ့တယ်။
ညီမ ချောရေ စိတ်ဟာ အရေးအကြီးဆုံးဘဲနော် စိတ်ဓါတ်မကျဘို့ အသေးအဖွဲ့ လေးတွေတောင်မှ သည်းမခံနိုင်တဲ့လူတွေ အတုယူဘို့ကောင်းတယ်
ညီမ ရေ အလုပ်ရှုတ်နေလို့ နောက်ကြမှ ရောက်လာတယ်
အင်း မျှော်လင့်ချက် မျှော်လင့်ချက် ....
September 10, 2010 at 5:21 AM
ချောရေ ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ရတော့ ကျနေတဲ့စိတ်ဓါတ်လေး ပြန်တက်လာရတယ်..
September 11, 2010 at 12:31 AM
“ဘ၀မှာ သာယာလှပတဲ့ ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုရင် ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ကျော်ဖြတ်ရလိမ့်မယ်” ဆိုတာလေးရယ် ၊ “မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး။ ဘယ်တော့မှ လွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးမပေးနဲ့။ အလျှော့မပေးနဲ့” ဆိုတဲ့ စာသားလေးတွေက တကယ်ကို ခွန်အားတွေပေးလိုက်တာပါပဲ အစ်မချောရယ်။
ဘာသာပြန် မျှဝေပေးတဲ့ အစ်မချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စိတ်ခွန်အားတွေ တကယ်ပဲ ရသွားပါတယ်။ ဒီပိုစ်လေးအတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်
ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ခွန်အားဖြည့်ပေးတဲ့ စာလေးပါပဲ ..း))
ဘာသာပြန်ရေးဖွဲ့ပုံကောင်းတော့ နဂိုဇတ်လမ်းကအရမ်းကို အသက်ဝင်တယ်။
ကျွန်မလည်း အရမ်းအလုပ်များပင်ပမ်းထားတာ အရုပ်ကြိုးပြတ်လိုပဲ။
ဒါပေမယ့် အခုဒီပို့စ်ကြောင့် နောက်အင်အားအသစ်တွေဖြစ်ရပါတယ်။
အားမာန် ကို ဖော်ကျူးနိုင်ပြီး မျှဝေနိုင်မှု ကလည်း ညက်ညောတာမို့ နှစ်သက်မိပါတယ် ။
ဖတ်ပြီး စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေ ရလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အလွယ်တကူ အရှုံးမပေးတတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားချီးကျူးမိတဲ့အပြင်၊ သူဘ၀ရဲ့အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေကို သူဖြတ်သန်းရချိန်မှာ သူ့ဘေးမှာ တစ်ချိန်လုံး မားမားမတ်မတ်အမြဲရပ်တည်အားပေးခဲ့တဲ့ သူ့မိသားစုနဲ့ သူ့ချစ်သူရဲ့စိတ်ဓါတ်ကလည်း လေးစားအတုယူစရာပါပဲ...
ဘ၀မှာ သာယာလှပတဲ့ ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုရင် ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ကျော်ဖြတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို အစ်မ ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်.
အဲဒိစကားလေးကို အရမ်းနှစ်သက်မိပါတယ် ..